သင်၏ WordPress ဆိုက်မှ Malware ကိုစစ်ဆေး၊ ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကာကွယ်နည်း | Martech Zone
ယခုအပတ်တော်တော်အလုပ်များခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသောအမြတ်အစွန်းမဟုတ်သောအရာတစ်ခုမှာသူတို့၏အခက်အခဲများနှင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည် - သူတို့၏ WordPress ဆိုဒ်သည် malware ကူးစက်ခံထားရသည်။ ဆိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး and ည့်သည်များအားကွဲပြားသောအရာနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Microsoft Windows ကိုကူးစက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် ကို malware.
ငါနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းလွှာအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးပြီးနောက်ငါကသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါ site ကို hack ခံခဲ့ရသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်သောအရာနှင့်ချက်ချင်းသူတို့ကိုအကြောင်းကြား။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါကအတော်လေးရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ငါဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ချက်ချင်းတိုက်ရိုက်သွားပြီးနောက် site ကိုပြန်လည်ကူးစက်။ ၎င်းသည် malware ဟက်ကာများကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် - သူတို့သည် site ကို hack ရုံသာမက၊ administrator အသုံးပြုသူကိုလည်း site သို့ထည့်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားလျှင် hack ကိုထပ်မံထိုးသွင်းသည့် core WordPress ဖိုင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
malware သည်ဝဘ်ပေါ်တွင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပြissueနာဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာများအပေါ်ကြော်ငြာကလစ်များ (ကြော်ငြာလိမ်လည်မှု)၊ ကြော်ငြာသူများအားအလွန်အကျွံသွင်းခြင်း၊ financial ည့်သည်၏ဘဏ္andာရေးနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရယူရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်မကြာသေးမီက - cryptocurrency အတွက် Malware ကိုအသုံးပြုသည်။ မိုင်းလုပ်သားများသည်တူးဖော်သည့်အချက်အလက်များအတွက်ကောင်းစွာငွေရကြသော်လည်းသတ္တုတွင်းစက်များဆောက်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတို့အတွက်လျှပ်စစ်ငွေတောင်းခံလွှာများကုန်ကျသည်။ ကွန်ပျူတာများကိုလျှို့ဝှက်စွာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မိုင်းလုပ်သားများသည်ကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲငွေရှာနိုင်သည်။
WordPress နှင့်အခြားအသုံးများသောပလက်ဖောင်းများသည်ဟက်ကာများအတွက်ကြီးမားသောပစ်မှတ်များဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိများစွာသောဆိုဒ်များ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် WordPress တွင်အဓိက site ဖိုင်များအားလုံခြုံရေးတွင်းများမှမကာကွယ်ပေးသော theme နှင့် plugin architecture ။ ထို့အပြင် WordPress အသိုင်းအဝိုင်းသည်လုံခြုံရေးတွင်းများကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းတို့တွင်ထူးခြားသည်။ သို့သော် site ပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏ site ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲများနှင့်အသစ်မွမ်းမံရန်သတိမရှိကြပါ။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို GoDaddy ၏ရိုးရာဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည် hosting စီမံခန့်ခွဲ WordPress ကိုသုညကာကွယ်မှုပေးထားပါတယ်သော) ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Malware စကင်နာနှင့်ဖယ်ရှားရေး ဝန်ဆောင်မှု။ WordPress ကဲ့သို့သော hosting ကုမ္ပဏီများကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည် Flywheel, WP အင်ဂျင်, LiquidWeb, GoDaddy နှင့် Pantheon ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးပြpatနာများဖြစ်ပွားသည့်အခါသင်၏ site များအားနောက်ဆုံးအခြေအနေရှိစေရန်အလိုအလျောက် update များကိုပေးသည်။ အများစုမှာ malware scanning နှင့် blacklisted themes များနှင့် site ပိုင်ရှင်များအား hack ခြင်းကိုတားဆီးရန် plugins များရှိသည်။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်အဆင့်မြင့် Managed WordPress host Kinsta ကိုကမ်းလှမ်းသည် - လုံခြုံရေးအာမခံချက်.
သင်၏ဆိုက်သည် Malware အတွက်နာမည်ပျက်စာရင်းဝင်ခြင်းလား -
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကို malware အတွက်“ စစ်ဆေးခြင်း” ကိုအားပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အများစုသည်အမှန်တကယ်အချိန်တွင်သင့်ဆိုဒ်အားလုံး ၀ စစ်ဆေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ malware ရှာဖွေခြင်းသည်ရလဒ်များကိုချက်ချင်းမပေးနိုင်သည့် third-party crawling tool တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ချက်ချင်းစစ်ဆေးပေးသောဆိုဒ်များမှာသင့်ဆိုဒ်တွင်ယခင်က malware ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သောဆိုဒ်များဖြစ်သည်။ ဝဘ်ပေါ်ရှိ malware စစ်ဆေးသောဆိုဒ်များမှာ -
ဂူဂဲလ်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအစီရင်ခံစာ - အကယ်၍ သင်၏ဆိုဒ်ကို Webmasters တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါကသင်၏ဆိုက်ကိုတွားသွားပြီး၎င်းတွင် malware များတွေ့ရှိသောအခါသူတို့သည်သင့်ကိုချက်ချင်းသတိပေးလိမ့်မည်။
က Norton ကို Safe Web ကို - Norton သည်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာပလပ်အင်များနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူများကိုသူတို့နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းလျှင်ညနေခင်းအားဖွင့်ရန်ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များသည် site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့၏ site ကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
Sucuri - Sucuri သည်နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံရသည့်နေရာနှင့်အတူအစီရင်ခံစာနှင့်အတူ malware ဆိုဒ်များစာရင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ သင့်ဆိုဒ်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါက၊ Re- စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ စာရင်းအောက်ရှိ link (အလွန်သေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်) ။ Sucuri တွင်ပြissuesနာများကိုစစ်ဆေးသောထူးခြားသည့် plugin တစ်ခုရှိပြီးသင့်အားနှစ်စဉ်သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည်။
Yandex - သင်၏ဒိုမိန်းအတွက် Yandex ကိုရှာပြီးကြည့်ပါက“Yandex ၏အဆိုအရ၊ ဒီဆိုဒ်သည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်” သင်သည် Yandex webmasters အတွက်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ သင်၏ဆိုဒ်ကိုထည့်နိုင်သည်၊ သွားနိုင်သည် လုံခြုံရေးနှင့်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်သင့်ဆိုဒ်ကိုရှင်းလင်းရန်တောင်းဆိုပါ
Phishtank - အချို့သောဟက်ကာများသည်သင်၏ site တွင် phishing scripts ကိုတင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ domain ကို phishing domain တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Phishtank တွင်ဖော်ပြထားသော malware စာမျက်နှာ၏အတိအကျ၊ URL အပြည့်အစုံကိုရိုက်ထည့်ပါကသင်သည် Phishtank တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်းသည် phishing site ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်စေမဲပေးနိုင်သည်။
သင်၏ဆိုဒ်ကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါကသင်၌စောင့်ကြည့်အကောင့်တစ်ခုရှိပါကဤ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှအသုံးပြုသူတစ် ဦး ထံမှအစီရင်ခံစာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သတိပေးချက်ကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့် ... ပြaနာတစ်ခုကိုသင်မမြင်ရသော်လည်းမှားယွင်းသောလက္ခဏာပြမှုများဖြစ်ခဲသည်။ ဤပြissuesနာများသည်သင်၏ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှဖယ်ထုတ်ပြီးဘရောက်ဇာမှပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်ရှိပြီးသားဖောက်သည်များသည်သူတို့နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်နေကြသည်ကိုသိလိုကြသည်။
အထက်ပါကုမ္ပဏီများသည် malware ကိုရှာဖွေရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းပြောဆိုကြသော်လည်း၎င်းသည်မခက်ခဲပါ။ အဆိုပါခက်ခဲအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ site ကိုသို့ရတယ်ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေနေသည်! အန္တရာယ်ရှိသောကုဒ်များကိုအများဆုံးတွင်:
ကို Maintenance - ဘာမှမလုပ်မီက၎င်းကိုထောက်ပြပါ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစာမျက်နှာ နှင့်သင့် site ကို back up ။ WordPress ၏ပုံမှန်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်း plugin များကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းသည်ဆာဗာပေါ်တွင် WordPress ကိုဆက်လက်လည်ပတ်နေ ဦး မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို site ပေါ်တွင်မည်သည့် PHP ဖိုင်ကိုမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသေချာစေလိုပါသည်။ သငျသညျမှာရောက်နေစဉ်, သင်၏စစ်ဆေးပါ .htaccess အသွားအလာကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းစေခြင်းငှါလူဆိုးစာရင်းကုဒ်ရှိသည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကို web server ကိုပေါ် file ကို။
ရှာရန် သင်၏ဆိုက်၏ဖိုင်များကို SFTP သို့မဟုတ် FTP မှတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးပေါ် plugins များ၊ themes များနှင့်အဓိက WordPress ဖိုင်များပြောင်းလဲမှုကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ ထိုဖိုင်များကိုဖွင့ ်၍ scripts သို့မဟုတ် Base64 command များ (server-script execution ကိုဖျောက်ရန်အသုံးပြုသော) မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုများကိုမဆိုရှာဖွေပါ။
နှိုငျးယှဉျ သင်၏ root directory ရှိအဓိက WordPress ဖိုင်များ၊ wp-admin လမ်းညွှန်နှင့်ဖိုင်အသစ်များသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောအရွယ်အစားဖိုင်များရှိမရှိသိနိုင်ရန် wp-ပါဝင်လမ်းညွှန်များဖြစ်သည်။ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီကိုဖြေရှင်းပါ။ သင်က hack ကိုရှာပြီးဖယ်ထုတ်ရင်တောင်၊ များစွာသော site ကို re-ကူးစက်ရန် hackers များသည် backdoors များမှထွက်ခွာသွားသည်။ WordPress ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းများမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဟက်ကာများသည် root directory ထဲတွင်မကောင်းသော scripts များကိုမကြာခဏထည့်လေ့ရှိပြီး script ကို hack လုပ်ရန်အခြားနည်းတစ်နည်းဖြင့်ခေါ်ဆိုပါ။ ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော malware script များသည်ပုံမှန်အားဖြင့် script file များကိုသာထည့်သွင်းသည် header.php or footer.php။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော scripts များသည် server ရှိ PHP ဖိုင်တိုင်းကို re-code code ဖြင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
Remove အရင်းအမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်သော Third-party ကြော်ငြာ script များ။ အွန်လိုင်းကွန်ယက်ကိုဖောက်ထွင်းခံရပြီဆိုတာကိုဖတ်တဲ့အခါငါကြော်ငြာကွန်ယက်အသစ်တွေမလုပ်ချင်ဘူး။
စစ်ဆေးခြင်း စာမျက်နှာပါဝင်တဲ့ embedded scripts အတွက်သင့်တင်ထားသောဒေတာဘေ့စ်ဇယား။ PHPMyAdmin ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရှာဖွေခြင်းနှင့်တောင်းဆိုသော URLs များသို့မဟုတ် script tags များကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအသက်မရှင်ခင် ... ချက်ချင်းပြန်လည်ဆေးထိုးရန်သို့မဟုတ်အခြား hack ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ site ကိုခိုင်မာစေရန်အချိန်ပြီ။
သင်၏ဆိုဒ်ကို Hack ခြင်းနှင့် Malware တပ်ဆင်ခြင်းမှသင်မည်သို့တားဆီးသနည်း။
Verify ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ။ ဟက်ကာများသည်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာသုံးစွဲသူထည့်သွင်းသော script များကိုထိုးလေ့ရှိသည်။ အသုံးမ ၀ င်သောအကောင့်ဟောင်းများကိုဖယ်ရှားပြီး ၄ င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုရှိပြီးသားအသုံးပြုသူသို့လွှဲပြောင်းပါ။ သင်အမည်ရှိအသုံးပြုသူရှိပါက admin ရဲ့, ထူးခြားသော login နှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသစ်ထည့်ပါနှင့်လုံးဝအကောင့်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
reset အသုံးပြုသူတိုင်းရဲ့စကားဝှက်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး သည်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်း၌ခန့်မှန်းရလွယ်ကူသောစကားဝှက်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ တစ်စုံတစ် ဦး အား WordPress ထဲသို့ ၀ င်နိုင်ပြီးသူတို့ကြိုက်သည့်အတိုင်းလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဆိုဒ်များစွာသည် hacked ကြသည်။
disable WordPress အက်မင်မှတဆင့်ပလပ်အင်များနှင့်အခင်းအကျင်းများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ဤဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်နိုင်ခြင်းသည်မည်သည့်ဟက်ကာမည်သူမဆို ၀ င်ရောက်နိုင်လျှင်ထပ်တူပြုလုပ်နိုင်စေသည်။ scripts တွေက core code ကိုပြန်ရေးလို့မရအောင် core WordPress ဖိုင်တွေကိုမရေးနိုင်အောင်လုပ်ပါ။ အားလုံးတစ်ဦးအတွက် WordPress ကိုပံ့ပိုးပေးသည့်အလွန်ကြီးသော plugin တစ်ခုရှိသည် တင်းမာ အင်္ဂါရပ်များတစ်တန်နှင့်အတူ။
manually သင်လိုအပ်သည့် plugin များ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို download လုပ်ပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ ဆိုက်ဖိုင်များသို့မဟုတ်ဒေတာဘေ့စ်ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသောအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာပလပ်ဂင်များကိုလုံးဝဖယ်ရှားပါ၊ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်များသည်။
Remove သင်၏ root directory ရှိဖိုင်အားလုံးကို wp-content folder (ဥပမာ root, wp-include, wp-admin) မှလွဲ၍ သူတို့၏ site မှတိုက်ရိုက် download လုပ်ထားသော WordPress ထည့်သွင်းမှုအသစ်ဖြင့်အစားထိုးပါ။
ထိန်းသိမ်းပါ သင်၏ဆိုက်! ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုက်မှာလုံခြုံရေးတွင်းပေါက်တွေ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတော့တဲ့သုံးစွဲသူဟောင်းတွေ၊ အခင်းအကျင်းအဟောင်းတွေနဲ့ plugins အဟောင်းတွေရှိတဲ့ WordPress ဗားရှင်းအဟောင်းရှိတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကိုဟက်ကာများဖောက်ခွဲရန်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ဆိုဒ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်မတတ်နိုင်လျှင်၎င်းကိုစီမံခန့်ခွဲထားသော hosting ကုမ္ပဏီသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်သေချာပါစေ။ hosting အတွက်နောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်သုံးခြင်းကဒီကုမ္ပဏီကိုဒီအရှက်ရစေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ခိုင်မာသောအရာများရရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆိုဒ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ထို site ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေနိုင်သည် .htaccess ပြန်ညွှန်း အသက်ရှင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ယခင်ကကူးစက်ခဲ့သောရောဂါပိုးကိုပင်ရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်စာမျက်နှာမှကွန်ယက်တောင်းဆိုမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန် browser ၏စစ်ဆေးရေးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ ကွန်ယက်တောင်းဆိုမှုတိုင်းသည်၎င်းသည် malware သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကင်းမဲ့စေရန်သေချာသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ထိပ်သို့ပြန်သွားပြီးအဆင့်များကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နေသည်။
တတ်နိုင်သည့်တတိယပါတီကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည် malware scan ဖတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု ကဲ့သို့ ဆိုက်စကင်နာသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုနေ့စဉ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးသင်က malware စောင့်ကြည့်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုတွင်နာမည်ပျက်စာရင်း ၀ င်နေသည်ကိုသင်သိစေလိမ့်မည်။ သတိရပါ - သင်၏ဆိုဒ်သည်သန့်ရှင်းသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်လူမည်းစာရင်းမှအလိုအလျောက်ဖယ်ရှားခံရမည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအသီးအသီးကိုဆက်သွယ်နှင့်အထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းနှုန်းတောင်းဆိုမှုကိုစေသင့်ပါတယ်။
ဒီလို hack တာဟာမပျော်ပါဘူး။ ဒီခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်ကုမ္ပဏီများသည်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ အားသွင်းကြသည်။ ဒီကုမ္ပဏီကိုသူတို့ site ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့ ၈ နာရီထက်မနည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်။
Tags: ESETGoogle Safe Browsing။ကို malwaremalware ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးက Norton ကို Safe Web ကိုnorton SafesitePhishTankဆိုက်SophosSpamHaus DBLအောင်နိုင်Sucuri Malware ဓာတ်ခွဲခန်းများWordPressYandex